Wararka Maanta: Arbaco, Aug 15, 2012-Afar qof oo shacab ah oo lagu afduubtay deegaanka Sool-joogto iyo waanwaan lagu jiro siideyntoodda
Afar qof oo shacab ah oo lagu afduubtay deegaanka Sool-joogto iyo waanwaan lagu jiro siideyntoodda Arbaco, Ogoosto, 15, 2012 (HOL)-Maleeshiyo watay dhawr gaadhi ayaa shalay galab afar qof oo xoolo dhaqato ah ku afduubtey meel u dhexeysa deegaanka Sool-Joogto iyo Buuhoodle, kuwaas oo la sheegay in lala tagay degmadda Buuhoodle oo hadda lagu hayo.
Kooxdan afduubtay afarta qof ayaa la sheegayaa inay dalbadeen siindeynta Nin la yidhaa Jaamac Kuutiye oo ah nin arrimo argagixiso ugu xidhan jeelasha Somaliland, kaas oo muddo dheerna ku xidhnaa jeelasha.
Haseyeeshee, odayaasha iyo waxgaradka deegaanka Buuhoodle ayaa ku mashquulsan soo deynta afarta qof ee la qafaashay, iyadoo waan waanteediina ilaa hadda lagu jiro.
Afartan qof ee la afduubtay ayaa la kala yidhaa Xuseen Axmed Carab, Khadar Xuseen Caydiid, Maxamed Axmed Caydiid iyo Saleebaan Aadan, kuwaas oo geel ku ilaalinayey deegaankaasi lagu soo weeraray.
Si kastaba ha ahaate, dhacdadan ayaa ku cusb Guud ahaan Somaliland, kaas oo dadku aad ula yaabanaayeen.
Barkhad-Ladiif M. Cumar, Hiiraan Online barkhadladiif@hiiraan.comHargeysa, Somaliland
Arbaco, August 15, 2012(HOL): Madaxweynaha Soomaaliya Shiikh Shariif Shiikh Axmed oo maanta ka soo laabtay dalka Boqortooyada Sacuudiga oo uu uga qeybgalay Shirkii waddamada Islaamka ayaa shir jaraa’id oo uu ku qabtay xarunta Madaxtooyada waxaa uu uga warramay hanjabaado loo jeediyay guddiga soo xulaya xubnaha baarlamaanka Soomaaliya, saameynta Xukuumadda Soomaaliya ay leedahay xilligan iyo waxyaabihii looga hadlay shirkii waddamada Islaamka ee uu ka qeybgalay. Safiirka dalka Britain u qaabilsan arrimaha Soomaaliya oo rajo ka muujiyay xaalada Soomaaliya (SAWIRRO) 8/15/2012 9:36 AM EST